I-Chavelas Villa ngasolwandle - I-Airbnb
I-Chavelas Villa ngasolwandle
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Chavelas Villa
Indlu entsha enhle enezitebhisi ezingu-2 ukusuka ebhishi noma edolobhaneni. Kulabo abafuna ukuphumula futhi bajabulele amabhishi amahle nezindawo ezithandwayo ze- "Ruta del Sol".
Ilungele umndeni omkhulu owodwa noma omncane ongu-2, indlu inamakamelo angu-3, imibhede ethokomele, a/c kuwo wonke amagumbi kanye nendawo, amagumbi okugezela angu-3 aphelele (ama-2 ngasese) anamanzi ashisayo, i-wifi, ikhishi eliphelele, amatafula angaphakathi nangaphandle kanye nezihlalo, indawo yokubhukuda yangaphandle esophahleni, i-grill kanye netafula lokwenza i-bbq, ama-hammock angu-3, indawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela/indawo yokupaka yezimoto ezingu-3 nengadi encane.
Itholakala ku-50m ukusuka ebhishi, le ndawo iphephile, ithulile kakhulu futhi ikude (2km) ukusuka e-Montañita enomsindo. E-500M kuphela ukusuka enkabeni yedolobha elithandekayo lase-Olón, le ndlu inikeza izivakashi zakhe isikhashana sokuphumula endaweni enhle kuyilapho enazo zonke izindawo (ukudla, amakhemisi, izindawo zokudlela, njll.) ebangeni lokuhanjwa ngezinyawo.
I-Chavelas villa isesifundazweni sase-Santa Elena, e-Ecuador.
Kunemisebenzi eminingi emihle ongayenza lapha. I-Montañita, Inhlokodolobha Yokutshuza Emagagasini e-Ecuador itholakala amakhilomitha angu-2 kuphela. Uma ungena ekugibeleni amagagasi, kulula ukuthola ikilasi lokutshuza elisezingeni eliphezulu nomunye wothisha bendawo.
Isixuku esincane, i-Olón iyidolobhana elihle lapho ungajabulela khona ibhishi futhi ube nesidlo sasemini esimnandi kwenye yama-Cabañas amancane atholakala khona ogwini. Impilo yasebusuku nayo iba nemidwebo eminingi ngezitolo eziningi zekhofi, ama-bar nezindawo zokudlela ezivuleka njalo ngonyaka.
Uma ufuna ukuzijabulisa ungabhukha uhambo futhi uhambe ngezinyawo, ukugibela amahhashi, ibhayisikili lasezintabeni, i-4x4, isithuthuthu, ukubukela inyoni noma imikhomo, iya ezimpophweni namachibi emvelo ehlathini njll.
Ibungazwe ngu-Chavelas Villa